Ukuphupha ngesilwanyana Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Kwiimeko ezininzi, igama elithi isilwanyana lisetyenziselwa ukuchaza umtsalane onethamsanqa, unodoli, okanye umtsalane kwiqela elithile labantu. Isilwanyana esifana nengonyama okanye ibhere emhlophe sihlala sisetyenziswa njengomzobo. Kodwa iincwadi ezinamabali ahlekisayo ezinjengeencwadi zinokubonakala njengezilwanyana zasekhaya.
IMascot ihlala ifunyanwa ngokunxulumene neziganeko ezikhulu, ezinjengeeOlimpiki, ii-cheerleader, okanye ubuntshatsheli bebhola ekhatywayo. Kodwa banokuthi basebenze njengezazisi kwinkampani, isixeko okanye iziko elinje ngombutho.
Izilwanyana zasekhaya zithandwa kakhulu kwintengiso kuba zihlala zisetyenziselwa ukuthengisa iimveliso kunye namashishini ngokulula. Kungenxa yoko le nto bethanda ukuvela kwimikhankaso yentengiso.
Kodwa kutheni siphupha isilwanyana? Ngaba sisikhumbuzo nje somsitho othile okanye isibhengezo? Okanye ngaba kukho umyalezo owahluke ngokupheleleyo ofihlwe ngasemva kwalo mfuziselo wephupha?
1 Uphawu lwephupha «isilwanyana» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isilwanyana» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isilwanyana» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «isilwanyana» - ukutolikwa ngokubanzi
Kuthathelwa ingqalelo kwimbono ngokubanzi, uphawu lwephupha "isilwanyana" luzisa izinto ezimangalisayo ephupheni. Izaziso ngokufanayo. Ezi ndaba ziya kutshintsha ikamva lakho. Ukuba inani lesilwanyana sasekhaya libonwa limnandi ephupheni, unokulindela utshintsho oluqinisekileyo.
Kwakhona, iphupha lesilwanyana sasekhaya linokuba nesilumkiso. Umntu kufuneka alumkele ubutshaba bomfazi el mundo yomlindo. Ukuba isilwanyana sibonakala ephupheni njengekhubalo okanye ikhubalo, umntu oleleyo ngokukhawuleza uba yinto ebalulekileyo. isigqibo Ndifanele ukuthobela. Ke ngoko, kuya kufuneka ufumane umbono ochanekileyo weziphumo zezenzo zakho.
Ukuba isilwanyana esiphuphayo sisilwanyana esithile, ngokuhlalutyo lokulala ngokubanzi, imiba yemifanekiso yamaphupha efanelekileyo kufuneka isetyenziselwe ukutolika. Ukuba isilwanyana sasekelwa kumfanekiso ohlekisayo ephupheni, uphawu lwephupha "elihlekisayo" nalo lifanelekile.
Uphawu lwephupha «isilwanyana» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwephupha kutolika iphupha apho isilwanyana sibonakala njengophawu lomntu okanye inkqubo umntu ophuphayo angayo. utshintsho wayethembe okona kulungileyo kwiimeko zakhe.
Isilwanyana ephupheni sinokubhekisa kwahlukileyo iingozi bhekisa kwinto umphuphi anokujamelana nayo ebomini bokuvuka. Ke ngoko, kufuneka ulumke kwaye uvavanye ngononophelo iinjongo zabo bakungqongileyo.
Ukuba isilwanyana sasekhaya sibonakala ngokunxulumene nomsitho wezemidlalo ngelixa ulele, oku kunokuqondwa njengesilumkiso kulowo uphuphayo. Kuya kufuneka ujonge isimo sakho sengqondo kwabanye abantu. Ukuba uphawu lwephupha "isilwanyana" lubonwa ngengqondo yomntwana, oku kunokubonwa ngokwengqondo. ingxaki khomba kwindawo yokunxibelelana. Amaphupha anokuba nengxaki kwihlabathi lokuvuka ngokusondela kwabanye abantu.
Uphawu lwephupha «isilwanyana» - ukutolika kokomoya
Ukuba ubona isilwanyana ephupheni lakho, kuya kufuneka uqhubeke ngokokutolikwa kwephupha. I-Hallucinations Lumka. Kungenxa yokuba le mifanekiso ilungileyo ngokubanzi ayinakufezekiswa kwaye kuthintela ukukhula kwengqondo kwalowo uphuphayo.